Shiinaha Newest Germany wuxuu xiraa epilation la qaadan karo alexandrite 808nm diodes laser laser timo mashiinka mashiinka qiimaha saloon Soo saaraha iyo Badeecada | LaserTell
Sidee u shaqeeyaa 808 Diode Laser?
AlexMED, caafimaad ahaan la xaqiijiyay inay gaarsiiso timo saarid nabdoon oo wax ku ool ah dhammaan maqaarka iyo noocyada timaha, waa kan ugu dhakhsaha badan laser diode ee LaserTell.
Waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda leysarka caadiga ah ee 808nm diode laser, iyadoo tamarta ay si qoto dheer ugu dhexjirto maqaarka maqaarka iyadoo leh awood dhexdhexaad ah oo sarreysa iyo celcelis celcelis celcelis ah 10 garaaca wadnaha-halkii-labaad si loo kululeeyo mashiinka timaha iyo timaha, halkii laga baabi'in lahaa hay'adda oksijiinta ee hareeraha timaha follicle. Dhanka kale, laxiriirida tignoolajiyada qaboojinta dusha sare ee Sapphire Dual-Chill Tip waxay baabiin kartaa saameynta kuleylka ee loo aaneynayo tamarta indhaha, iyadoo si weyn u wanaajinaysa waxqabadka daaweynta iyo amniga labadaba.
Maxaa loo doortaa AlexMED?
• Kuleylka tartiib tartiib ah ayaa fure u ah!
* Ka istaagida Warshadaha oo si tartiib tartiib ah ugu hadla. (kuleylka siilka tartiib tartiib ah)
—Ka dhig inaad si fudud u qarxiso timo aan loo baahnayn oo ay ku jirto raaxo daran.
* Lagu daro qaboojinta Talo Bixinta Dual-Chill, waxay ka dhigeysaa mid aad u raaxo leh oo aan loo baahnayn jel iyo xanuun baabi'in.
* Timo Joogto ah dhamaan timaha midabada leh iyo dhamaan noocyada maqaarka — oo ay kujiraan maqaarka maqaarka.
- Dabacsanaantaani waxay ka dhigeysaa mid ku habboon labada dhakhtar iyo xirfadlayaal caafimaad.
* Heerka caymiska ugu dhakhsaha badan ee warshadaha, oo leh barxad weyn 13x13mm iyo illaa 10Hz celcelis celcelis.
* Ma jiraan adeegsiyo jaban, oo qiimo jaban.
• Xaqiiqdii Xanuun la'aan
* Si nabad ah oo tartiib ah u kululee maqaarka heerkul wax u dhimaya xididdada timaha kana hor istaagaya dib-u-soo-kabashada, laakiin aan dhaawaceynin maqaarka ku xeeran
* Talooyinka Qaboojinta Safayr ee Labada-Chill Tip loogu talagalay in lagu ilaaliyo lakabka sare ee maqaarka iyada oo la yareeyo heerkulka dusha sare iyo ka hortagga dhaawaca kuleylka ee laydhka leysarka.
AlexMED (808nm Diode Laser) Codsiyada:
Dhimista Timaha Joogtada ah dhamaan timaha midabka leh iyo dhamaan noocyada maqaarka — oo ay kujiraan maqaarka maqaarka.
Xanuun-la'aan, Timo-Bilaash - Timo Goynta Raaxo lehl
Mawjada (Spectrum) 808nm
Cabbirka Barta 15x15mm2 (Diode Laser)
Muddada wadnaha 10-400ms
Qaboojinta Sii socda Crystal & ExtrChill la xiriir qaboojinta (-16 ℃ ~ -5 ℃)+ Qaboojinta hawada+ Qaboojinta wareegga biyaha oo xiran
Muujin 10.4 ″ Xaqiiqda Xaqiiqda Muuqaalka LCD Touch Screen
Cabirka (WxDxH) 42 * 42 * 115cm
Hore: Awoodda Sare ee 1500W cabbirka weyn ee mashiinka timo jarista Diode Laser
Xiga: Aragtida qaybiyaha wuxuu rabay saarista xididka xididdada dhiigga ee laser-ka ah 980nm
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Laser Epilator Ipl, Ipl Xenon Flash Siraaj, Diode Timo Goynta Laser Guriga, 3 Gudaha 1 Ipl, Opt Shr Ipl Timaha Jooji, Module Laser 808, Dhammaan Alaabooyinka Qolka 308, No.12, Jingsheng South 2nd Wadada, Degmada Tongzhou, Beijing, Shiinaha